MMM: Ngalahlekelwa ngu-R90 000 esikhundleni sokuba ngusozigidi ngokushesha | isiZulu
MMM: Ngalahlekelwa ngu-R90 000 esikhundleni sokuba ngusozigidi ngokushesha
Cape Town – Yize noma lilokhu liqhubeka nokukhula ibhanoyi lodumo elingu-MMM ngohlelo lwalo oseluvuselelwe kabusha eNingizimu Afrika, uhlu lwabantu asebephenduke izisulu zaleli bhanoyi nalo lulokhu lukhule njalo, ngokwabafundi abahlukene asebethinte iFin24.
U-MMM wavala ngonyaka odlule ngemuva kokuhluleka kwabantu ababewusebenzisa ukunikeza amaphoyinti atholwa ngokunikela ngemali labo abasemazingeni aphansi ebhanoyi. Kube sekusungulwa uhlelo ulusha sha luka-MMM nolwethulwe ngo-2017.
Akucaci ukuthi ingakanani imali abantu baseNingizimu Afrika eyabalahlekela kuleli bhanoyi, njengoba abanye benamahloni kakhulu ukuthi baphumele obala. Phezu kwalokho, azikho izinyathelo zomthetho abangazithathela leli bhanoyi.
Labo abazama ukuphumela obala ngokulahlekelwa yizimali bathola ukuhlukunyezwa ezinkundleni zokuxhumana okubalwa nakwi-group yeWhatsApp, ngokusho kwesinye isisulu esivulele iFin24 isifuba.
OLUNYE UDABA: Omunye ogilwe uMMM: Ngalahlekelwa u-R35 000 ngemuva ‘kokujama’ kohlelo
Nazi ezinye zezinto ezishiwo ngabafundi beFin24 – nagodliwe amagama abo ngenhloso yokubavikela ekuhlukunyezweni:
Isisulu sa-MMM #1: salahlekelwa u-R500 000
“Nginolwazi oluningi ngomlando ka-MMM eNingizimu Afrika. Ngangiyilungu nami, ngalahlekelwa ngaphezu kuka-R500 000, kodwa nami ngayenza imali eningi.”
Isisulu sa-MMM #2: salahlekelwa u-R90 000
“Mina nonkosikazi wami saba yizisulu zaleli bhanoyi kanti ngesikhathi liqala sasinethemba lokuthi sizothola amaphuzu amaningi. Sasinesibindi, kodwa saba yizilima ukuthi sincengwe ukuthi sikhiphe imishwalense yethu bese sinikela ngo-R90 000 ku-MMm.
“Sasinethemba lokuthi ezinyangeni eziyisithupha sizojika sibe ngosozigidi.
Isisulu sa-MMM #3: kwalahleka imali engaphzu kuka-R2 000
“Yebo nami ngalahlekelwa u-R1 000 nodadewethu walahlekelwa u-R1 000 ku-MMM. Lokhu ukuqolwa ngempela, kucacile manje ukuthi angeke sisabuyelwa ama-old mavros.
Isisulu sa-MMM #4: salahlekelwa u-R30 000
“Mina ‘nganikela’ ngase ngalahlekelwa u-R30 000 ngo-Ephreli 2016.
“Kuyakhoneka ukuhlonza abantu abathola ‘iminikelo’ okumele baphoqwe ukuthi bayibuyise.
Isisulu sa-MMM #5: salahlekelwa u-R15 000
“Ngalahlekelwa u-R15 000. Ukuqolwa okunje.”
Isisulu sa-MMM #6: kwalahleka imali engaphezulu kuka-R40 000
“Ngalahlekelwa u-R7 000, udadewethu u-R20 000, abangani u-R15 000 kanye nabanye…”
Isisulu sa-MMM #7: salahlekelwa u-R20 000
“Ngalahlekelwa u-R20 000 kanye nenzalo yenyanga eyodwa.”
Khonamanjalo, omunye umfundi weFin24 othi uyilungu lokuqina lika-MMM ubhalele iFin24 nalapho eshiye angalazi eyisola ngokuthi ishicilele lokhu okushiwo yizisulu ngaphandle kokuqinisekisa ubuqiniso kuqala.